Tababbarka HCA iyo CMS - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Xarunta Tababbarka Bixiyaha > Tababarka HCA iyo CMS
Raadi ilaha aad u baahan tahay si aad u dhammaystirto tababarka bixiyaha khasabka ah iyo ikhtiyaariga ah.
Boggan, waxaad ka heli doontaa Hay'adda Daryeelka Caafimaadka (HCA) muhiim ah iyo tababarro CMS ah & caddayn loogu talagalay Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee bixiyeyaasha qandaraaska ku qaatay Washington.
HCA-da Waajibka ah iyo Tababbarka & Imtixaannada CMS
* Guji si aad u aragto tababarka iyo faahfaahinta caddaynta
Hanuuninta Bixiyeyaasha Cusub
Bixiyeyaasha qandaraaska cusub qaatay waa inay dhammaystiraan hanuuninta maalmood gudahood 90 qandaraaskooda taariikhda uu dhaqan galayo.
Bilow Hanuuninta ➜
Kadib markaad dhamaysatay jihaynta sidoo kale waa inaad buuxisaa cadeyn.
Labada Baahida Gaarka ah ee Xaq u leh (D-SNP) iyo Tababarka Model of Care (MOC)
Xarumaha Medicare iyo Adeegyada Medicaid (CMS) waxay u baahan yihiin dhammaan bixiyeyaasha daryeelka ee daaweeya bukaanada ku diiwaangashan Qorshaha Dual Eligible Special Needs (D-SNP) si ay u dhammaystiraan tababarka Model of Care (MOC) ee sannadlaha ah.
Waa in lagu buuxiyaa: Bixiyeyaasha iyo shaqaalaha bixiya daryeelka joogtada ah ee xubnaha ka diiwaangashan Qorshaha Baahiyaha Gaarka ah (sida MD, DO, ARNP, RN, LPN, iwm). Ka dib markaad dhammaystirto jihada waa inaad sidoo kale dhammaystirtaa caddaynta.
Bilow D-SNP Qaabka Tababarka Daryeelka ➜
Xuquuqda bukaanka iyo masuuliyadaha & Tilmaamaha Hordhaca Tababarka
Waa in lagu buuxiyaa: Bixiyeyaasha iyo shaqaalaha (sida, MD, DO, ARNP, RN, LPN, Maamulayaasha, Maareeyayaasha Xafiiska, Kaaliyeyaasha Caafimaadka, Qaabilaada, Isuduwayaasha Diiwaanka Caafimaadka, Isuduwayaasha Gudbinta, iwm.).
Bilow Xuquuqda Bukaanka iyo Mas'uuliyadaha & Tilmaamaha Hordhaca Tababarka ➜
U hogaansanaanta Guud & Khiyaanada, Tababarada Qashinka iyo Xadgudubka
CHPW waxa looga baahan yahay qandaraas lala galo Xarumaha Medicare & Medicaid Services (CMS) iyo Maamulka Daryeelka Caafimaadka Gobolka Washington (HCA) in shabakada bixiyaha qandaraaska leh looga baahan yahay inay dhamaystirto U hogaansanaanta Guud iyo (haddii aan si toos ah loola heshiin Medicare) Khayaanada, Qashinka iyo tababbarka ku-takri-falka ee qanciya shuruudaha hoos yimaada 42 CFR §438.608 (a) iyo (b), §422.503 (vi) (C) iyo §423.504 (b) (vi) (C).
Bixiyeyaasha qandaraaska haysta ee CHPW waxaa looga baahan yahay inay hayaan caddaynta waana inay sameeyaan caddaynta tababarka la heli karo ilaa toban (10) sano haddii la codsado.
Tababarka iyo waxbarashada noocan oo kale ah waa in ay dhacaan ugu yaraan sannadkii waana in laga dhigaa qayb ka mid ah hanuuninta tababarka shaqaale cusub.
Dhammaan shaqaalaha, oo ay ku jiraan hoggaankaaga sare, maareeyayaasha, wadaaddada/shaqaalaha maamulka, biilasha, takhaatiirta, iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka ayaa looga baahan yahay inay helaan tababarkan.
Bixiyuhu waxa uu isticmaali karaa qalabkaaga tababarka, laakiin waa in uu buuxiyaa heerarka CMS iyo shuruudaha hoos yimaada 42 CFR §438.608 (a) iyo (b), §422.503(b)(vi)(C),iyo §423.504(b)(vi)( C) ama waxaad geli kartaa tababarka CHPW ee GCFWA HALKAN.
Sida ay sheegtay CMS, waxaa jira hal marka laga reebo tababarka Khiyaanada, Qashinka iyo Xadgudubka iyo shuruudaha waxbarashada. CMS waxay hirgalisay "deeming" marka laga reebo hay'ad ama shaqsi ka diiwaangashan Medicare Qaybta A ama B. Tani waxay ka dhigan tahay in shuruudaha tababarkaaga ee Khiyaanada, Qashinka iyo Xadgudubka uu ku qanacsan yahay haddii aad ka diiwaangashan tahay Medicare Qaybta A ama B; sidaa darteed, markhaatigaaga sanadlaha ah wuxuu khuseeyaa oo keliya Qeybta Guud.
Tababar Ikhtiyaari ah
Hanuuninta Bixiyeyaasha la aasaasay
Bixiyeyaasha la aasaasay waxay marin ka heli karaan jiheyntayada si ay u cusboonaysiiyaan uguna cusboonaysiiyaan.
Tababbarka Adeegyada Dhaqan ahaan iyo Luqad ahaan Ku habboon (CLAS)
Waxaa lagula taliyay dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka (ie MD, DO, ARNP, RN, LPN, Maamulayaasha, Maareeyayaasha Xafiiska, Kaaliyeyaasha Caafimaadka, Qaabilaada, Isuduwayaasha Diiwaanka Caafimaadka, Isuduwayaasha Gudbinta, iwm.).
Ku Bilow Tababbarka Adeegyada Dhaqan ahaan iyo Luuqad ahaan Ku habboon Training
Guudmarka Maareynta Caafimaadka CHPW
Baro kala duwanaanshaha CHPW Barnaamijyada Maareynta Caafimaadka. Barnaamijyadani waxay ka caawin karaan bukaanada qaba xaalado murugsan ama badan inay si wanaagsan u maareeyaan caafimaadkooda.
Dulmarka Maareynta Caafimaadka CHPW ➜
Email u dir Kooxdayada Xiriirka Bixiyaha su'aalo la xiriira barnaamijyadayada tababarka. Mid ka mid ah Wakiilada Xiriirka Bixiyeyaasha ayaa kula soo xiriiri doona.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Abriil 21, 2022